Isahluko 114 | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ngadala umhlaba; ngenza izintaba, imifula, nazo zonke izinto; ngabumba amaphethelo ezulu nomhlaba; ngahola amadodana Ami nabantu Bami; ngayalela zonke izinto nezindaba. Manje, ngiyoholela amadodana Ami emuva eNtabeni iSiyoni, ukubuyela lapho engihlala khona, okuyoba yisinyathelo sokugcina emsebenzini Wami. Konke engikwenzile (konke okwenziwe kusuka esikhathini sokudala kuze kube manje) bekungokwesigaba samanje somsebenzi Wami, futhi ngaphezu kwalokho kungokokubusa kwakusasa, umbuso wakusasa, nokuthi Mina namadodana Ami angamazibulo sibe nokuthokoza okuphakade. Lokhu kube ngumgomo Wami ekudaleni zonke izinto futhi kuyoba yimpumelelo Yami yokugcina yokudala. Kunenhloso ngemuva kwengikushoyo nengikwenzayo; konke kunohlelo futhi akwenziwa ngobudlabha. Nakuba ngithi Kimi konke kuyinkululeko, nokho konke kunezimiso, konke engikwenzayo kusekelwe ekuhlakanipheni nasesimweni Sami. Kukhona enikubonile kulokhu? Kusuka esikhathini sokudala kuze kube namhlanje, ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo, akekho ofike ekuthini angazi futhi akekho obone ubuso Bami bangempela. Ukukhetha engikwenzela amadodana Ami angamazibulo kungenxa yokuthi kakhulu ayingxenye yesiqu Sami.
Lapho ngidala umhlaba, ngenza umuntu waba yizigaba ezine ezilandelana ngokuhambisana nezimfuneko Zami, okuyilezi: Amadodana Ami, abantu Bami, labo abangenzela umsebenzi, nalabo abayobhujiswa. Kungani amadodana Ami angamazibulo engekho kulolu luhla? Kungenxa yokuthi amadodana Ami angamazibulo awayizo izinto zokudalwa; avela Kimi futhi akuwona awesintu. Ngenzela amadodana Ami angamazibulo amalungiselelo ngaphambi kokuba yinyama; ukuthi yiliphi ikhaya abayozalelwa kulo nokuthi ngubani oyoba khona ukubenzela umsebenzi—zonke lezi zinto zahlelwa Yimi. Ngahlela futhi ukuthi kuyoba ngasiphi isikhathi futhi yibaphi kubo abayozuzwa Yimi kabusha futhi ekugcineni siyobuyela eSiyoni ndawonye. Lokhu kwahlelwa ngaphambi kokudalwa, ngakho akukho muntu owaziyo ngakho futhi ayikho incwadi okubhalwe kuyo ngoba lezo yizindaba zaseSiyoni. Ngaphezu kwalokho, lapho ngiba yinyama, angimnikanga umuntu la mandla, ngakho akekho owayazi lezo zinto. Lapho senibuyele emuva eSiyoni, niyokwazi ukuthi naninjani esikhathini esedlule, ukuthi ninjani manje, futhi nenzeni kulokhu kuphila. Njengamanje ukuthi nje nginitshela lezi zinto ngokusobala kancane kancane, kungenjalo beningeke niqonde kungakhathaleki ukuthi nizimisela kangakanani, futhi beniyophazamisa ukuphatha Kwami. Namuhla, ngisho ngihlukanisiwe nenyama yeningi lamadodana Ami angamazibulo, singaboMoya owodwa, futhi nakuba ukubonakala kwemizimba yethu kwehlukene, kusuka ekuqaleni kuya ekugcineni siwuMoya owodwa. Nokho, inzalo kaSathane ngeke isebenzise lokhu njengethuba lokusetshenziswa kabi. Noma ungazifihla kanjani, kuhlala kukha phezulu, futhi ngeke ngivume. Ngakho umuntu uyabona kulokhu ukuthi labo abagxila kokukha phezulu futhi bafune ukungilingisa ngaphandle baqiniseke ngamaphesenti ayikhulu ukuba nguSathane. Ngoba umoya wabo wehlukile futhi abayibo abalabo engibathandayo, kungakhathaleki ukuthi bangilingisa kangakanani abafani Nami. Ngaphezu kwalokho, ngoba amadodana Ami angamazibulo ikakhulu anoMoya owodwa Nami, ngisho engangilingisi, akhuluma futhi enze ngendlela efanayo Nami, futhi wonke athembekile, amsulwa, futhi avulekile (mayelana nalabo abantula inhlakanipho kungenxa kuphela yokuhlangenwe nakho kwabo emhlabeni okunomkhawulo, futhi ngakho-ke ukuntula ukuhlakanipha akubona ubuthakathaka bamadodana Ami angamazibulo; lapho bebuyela emzimbeni bonke bayoba sesimweni esihle). Ngakho kungalesi sizathu esichazwe ngenhla ukuthi abantu abaningi abakaguquli imvelo yabo endala kungakhathaleki ukuthi ngibhekana kanjani nabo. Nokho mayelana namadodana Ami angamazibulo, ahambisana nezinhloso Zami ngaphandle kokuba ngibhekane nawo futhi lokhu kungenxa yokuthi singaboMoya owodwa. Bezwa emoyeni wabo ukuzimisela ukuzikhandlela Mina ngokugcwele. Ngakho ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo, akukho muntu ocabangela izinhloso Zami ngokumsulwa nangobuqotho; kungemva kuphela kokunqoba Kwami uSathane lapho bezimisela khona ukungisebenzela.
Ukuhlakanipha Kwami namadodana Ami angamazibulo kungaphezulu kwakho konke, kunqoba konke, futhi akukho nto, noma umuntu noma udaba okulokotha kuvimbe indlela. Ngaphezu kwalokho, akukho muntu, udaba, noma into engabanqoba, futhi kunalokho konke kuthoba ngokulalela phambi kwesiqu Sami. Lokhu kuyiqiniso elenzeka phambi kwamehlo omuntu futhi yiqiniso esengilizuzile. Noma ngubani oqhubeka nokungalaleli (labo abangalaleli basabhekise kuSathane nalabo abangenwe nguSathane ngokungangabazeki bawuSathane), ngiyobabhubhisa nakanjani ngokuphelele ukuze kungabi nenkinga esikhathini esizayo; bayofa ngokushesha ngokusola Kwami. Lolu hlobo lukaSathane luyilabo abangazimisele ukungisebenzela futhi lezi zinto zilokhu zahlala zimelana Nami ngenkani kusuka esikhathini sokudala, futhi namuhla ziyaphikelela nokungangilaleli (abantu abakwazi ukubona lokhu ngoba kuwudaba nje olumayelana nomoya. Lolu hlobo lomuntu lumele lolu hlobo lukaSathane). Ngiyobabhubhisa kuqala ngaphambi kokuthi konke okunye kulunge, ngibenze bathole ukuqondiswa nokujeziswa okunzima kuze kube phakade (“ukubhubhisa” lapha akusho ukungabi khona, kodwa kunalokho kubhekise ezingeni lesihluku abazobhekana naso futhi igama “ukubhubhisa” lapha lehlukile egameni elithi “ukubhubhisa” okusetshenziswa kulabo abazoshabaliswa), futhi bayokhala futhi bagedle amazinyo kuze kube phakade naphakade, okungenasiphetho. Umuntu akakwazi nhlobo ukusicabanga lesi senzeko. Ngokucabanga kwesintu esifayo, abakwazi ukuqonda izinto ezingokomoya, ngakho niyoqonda kuphela izinto ezengeziwe emva kokubuyela eSiyoni.
Ekhaya Lami lesikhathi esizayo ngeke kube khona muntu ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo Nami futhi kungaleso sikhathi kuphela lapho umgomo Wami uyofezwa khona futhi uhlelo Lwami luyofezeka khona ngokugcwele, ngoba konke kuyobuyiselwa esimweni sako sokuqala futhi ngakunye kuyohlelwa ngokohlobo lwakho. Amadodana Ami angamazibulo ayobuyela Kimi, amadodana nabantu Bami bayobuyela endaweni yabantu abadaliwe nabenzi bomsebenzi nababhujisiwe bayobuyela kuSathane. Emva kokwahlulela umhlaba, Mina namadodana Ami angamazibulo siyoqala futhi impilo yobunkulunkulu futhi ngeke angishiye futhi ayohlala endawonye Nami. Zonke izimfihlakalo ezingaqondwa ngabantu ziyokwambulwa, kancane kancane kini. Kuwo wonke umlando, kube khona abantu abangebalwe ababulawe ngenxa yegama Lami, bezinikela ngokugcwele Kimi, kodwa abantu bayizidalwa empeleni futhi noma bangalunga kangakanani ngeke bahlukaniswe njengoNkulunkulu; lokhu kuyinkambiso engagwemeki futhi ngeke iguqulwe ngumuntu. Empeleni, nguNkulunkulu odala zonke izinto nabantu bayizinto ezidaliwe, futhi uSathane uhlala eyinto engiqonde ukuyibhubhisa nesitha Sami engisizondayo—kuwumqondo ongowangempela kakhulu wokuthi “ingwe ayiwaguquli amabala ayo.” Ukuba kulesi simo nalesi sigaba manje kuyisibikezelo sokuthi Mina namadodana Ami angamazibulo siyongena ekuphumuleni. Lokhu kungenxa yokuthi umsebenzi Wami emhlabeni uphethwe ngokuphelele futhi isinyathelo somsebenzi Wami esilandelayo sizodinga ukuba ngiphindele emzimbeni ukuze uphethwe. Lezi yizinyathelo zomsebenzi Wami futhi kade ngazihlela kahle. Leli phuzu kufanele libonwe ngokucacile, kungenjalo abantu abaningi bayokwephula izinqumo Zami zokuphatha.